Mobile Kushambadzira Statistics ye 2015 | Martech Zone
Hazvishamise kuti tiri kugovera iyi infographic pazuva ratakashanyira dzimbahwe re Bluebridge, yedhijitari nhare yekushandisa chikuva. Isu tanga tine yakasimba kwazvo mbozhanhare yekushandisa, asi kambani yakakwenya kure nefoni, uye ikozvino isu takanamatira neyakavhunika nhare mbozha.
Isu tinoziva kuti tiri kurasikirwa nechimwe chibatano nekusasundira zvirimo kupuratifomu. Tanga tichitarisira kuwana vhezheni itsva kumusoro, uye Bluebridge ine yakanaka kwazvo suite yezvishandiso. Ivo vari kuita risingadaviriki basa uye kukura nekukurumidza.
Iko kukurumidza kusimuka kweiyo smartphone uye kutorwa kwehwendefa kwakabata chinenge chero chikamu cheshambadziro yedhijitari. Izvo zvinokanganisa zvinobva kune yazvino 'Mobile-inoshamwaridzika' algorithm shanduko kumigumisiro yekutsvaga kweGoogle kuburikidza nemitengo yakaderera yekutendeuka pamafoni efoni, kushandiswa kwemagariro enhau parunhare uye kuona kuti maemail edu ari ane hushamwari. Dave Chaffey
Pfungwa kubva kuHurumende yeMafoni Ekushambadzira 2015
86% yenguva inoshandiswa pa nharembozha kunyorera nhare mbozha. Kana iwe uchida kuita nharembozha, inguva yekudyara mune mbozhanhare yekushandisa!
90% yevatengi ve smartphone vanoshandisa foni yavo pre-kutenga zviitiko uye 84% yevatengi vanoshandisa zvishandiso zvavo kubatsira kuratidza vachiri muchitoro.
25% yehuwandu mibvunzo yekutsvaga ikozvino pane mbozhanhare.
In 2016, mobile kushambadzira kushandisa ichapfuura kushandisa pa desktop, ichisvika anosvika madhora makumi manomwe emadhora pasi rese.
Nharembozha email yakavhura mitengo yakakura 180% mumakore matatu, iine 48% emaemail ese akavhurwa pane smartphone.
Tags: 2015mobile kushambadzira kushandisaMobile mafomuMobile Appsnharembozha email yakavhura mweronhare yekushambadzira infographicnhamba dzekutengesa nharenhamba dzekutengesa nharemobile search
RelateIQ: Hukama Hwehungwaru Hwakagadziriswa CRM